Ridley ọ bụ ezigbo igwe eji agba igwe? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Ridley anyịnya igwe maka ire ere - akwụkwọ ọgụgụ zuru ezu
Ridley ọ bụ ezigbo igwe eji agba igwe?
Okechukwuanyịnya igwe bụukwu. Naanị m zụrụ otu ma na-anụ ụtọ ya. Lọ ahịa ndị na-ekpofu ndị ọzọụdịbụ nnọọ ajọ mmadụ. N'ime afọ ole na ole mgbe ha gbanwecharaụdị, ha ga na agho ugboala ha na ere taa.13.09.2011
A no m ebe a ime ka inabata ohuru Ridley Fenix. Na-esote m nwere Bert Kenens, Onye njikwa ngwaahịa na Ridley. Bert, Fenix ​​abụrụla akụkụ dị mkpa nke igwe ịgba Ridley ọtụtụ afọ.
Kedu oge anyị kwesịrị ịlaghachi azụ iji chọpụta Fenix ​​mbụ? Anyị ga-alaghachi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ asatọ iji chọpụta iwebata nke mbụ Fenix ​​igwe kwụ otu ebe na anyị nso na ebe anyị malitere igwe kwụ otu ebe afọ asatọ gara aga Fenix ​​abụrụla otu n'ime ụdị ndị kachasị ewu ewu na Ridley Road nso. Anyị hụrụ ụdị ndị ọgba ịnyịnya na Fenix ​​anyị niile. Anyị ahụwo ndị na-agba ịnyịnya egwuregwu na ndị asọmpi ọkachamara na-eji igwe kwụ otu ebe na njem ha na-eme gburugburu ụlọ elu ụka ma ọ bụ agbụrụ dị ka Tour of Flanders.
Agụrụ m na André Greipel bụ onye ọkwọ ụgbọ ule kacha mkpa maka Fenix. Ya na ndị ọzọ na-agba lọtrị ahụ nwere obi ụtọ na igwe kwụ otu ebe na ha kpebiri iji igwe kwụ otu ebe na cobblestone ochie. Nke ahụ ọ bụ eziokwu? Nke ziri ezi, mana mgbe ahụ anyị ga-agago otu nzọ ụkwụ azụ na 2011 mgbe anyị malitere ịrụ ọrụ na ndị otu Lotto ọzọ na ndị otu Lotto gwara anyị ka anyị mepee igwe kwụ otu ebe, otu etiti maka oge gboo.
Dị ka ị maara, mmiri oge gboo ebe a na Belgium bụ ndị ama ama maka ụzọ ọjọọ ha, okwute na ọtụtụ gbagọrọ agbagọ ma gbagọọ agbagọ n'okporo ámá. Ya mere, ha na-achọ igwe kwụ otu ebe nke siri ike ma na-anabata ya n'otu akụkụ ma dịkwa mma nke ukwuu na nke ọzọ. Ihe ngosi nke mbu di njikere na oge opupu ihe ubi nke 2012 na André Greipel bu otu n’ime ndi na-anya ugboala ndi nyochachara ihe nlere a.
Na njedebe, ndị otu ahụ nwere afọ ojuju na ịdị mma na nsonaazụ nke mmepe ahụ. Mgbe anyị malitere Fenix ​​ochie na 2013, ndị Lotto otu ji igwe kwụ otu ebe na niile nke mmiri oge gboo a oge. Ọ bụ kpọmkwem ihe ha na-achọ.
Na Fenix ​​ochie anyị ejirila tube dị diamond, nke na-eme ka etiti ahụ dị ike ma na-enye igwe kwụ otu ebe, na n'oche oche anyị etinyeworị ụfọdụ mgbatị iji mezi nkasi obi nke igwe kwụ otu ebe. Eku ahụ adịlarị mma na taya 25 millimita, ọbụlagodi na 25 millimeters ka bụ ihe dị iche na igwe kwụ otu ebe n'oge ahụ, mana enwegorịrị igwe kwụlụ ma wuo ya. Ngwa, ka anyị gaa n’ihu n’afọ 2015, mgbe a malitere Fenix ​​SL.
Isabel n’ezie, mana anyị ga-efoghachi azụ n’afọ 2014. N’ezie, anyị bidoro mepee Fenix ​​SL gbadoro ụkwụ Fenix ​​ndị ochie anyị nwere na mbụ. Anyị mekwara mmepe a yana ndị otu Lotto yana ndị otu Lotto nwere isi ihe abụọ achọrọ: iji belata ibu, nke bụ ihe dị mma mgbe ị na-agwa ndị ịgba ịnyịnya ígwè ọkachamara okwu, na ịbawanye nkasi obi nke igwe kwụ otu ebe.
Anyị na-amụba nkasi obi nke igwe kwụ otu ebe site redesigning n'azụ nke etiti. Anyị ji oche oche nwere ọdịdị nke dabere na oche oche nke Helium, ya bụ, igwe kwụ otu ebe anyị nwererịrị na mpaghara anyị, yana C-tube nke 27.2 millimeters.
Ihe si na ya pụta bụ ibu dị ala karị, nkasi obi karịa na ọbụlagodi ike ịkwado taya 28 millimita na-enweghị imebi ike nke usoro ahụ na igwe kwụ otu ebe. André Greipel gosipụtara na igwe kwụ otu ebe na okpokolo ahụ ka siri ike na 15th ogbo nke njem 2015, ebe ọ malitere na Fenix ​​SL kama nke Noa SL n'ihi na Fenix ​​dị ntakịrị, mana ọzọ All - karịa helium. André Greipel, ọ lanarịrị ịrị elu nke ụdị nke abụọ wee merie agba mgba na njedebe nke ogbo ahụ, nke ahụ bụkwa mmeri mbu nke Fenix ​​SL na Tour de France.
Mana ọ bụrụ na m chetara nke ọma, ị chụpụrụ ụdị Fenix ​​SL a ntakịrị? Nke ahụ dị mma, ejirila m igwe kwụ otu ebe na ọzụzụ na asọmpi dị ka ọmụmụ dị ka klaasị kpochapụla maka usoro ọzụzụ ngwa ngwa na sekit anyanwụ. Maka m ọ bụ ụlọ na-eme ihe ike, na-adị mma ma na-agbasi ike, m ga-asị na ọ bụ igwe kwụ otu ebe zuru oke maka onye ọ bụla site na onye na-asọmpi asọmpi na nnukwu onye na-agba ọsọ na onye na-agba ntụrụndụ. Ọ bụ igwe kwụ otu ebe zuru oke, mana mgbe m kwuru: igwe kwụ otu ebe, ị nwere ike ime ka ọ bụrụ nke zuru oke? N'ihi na mmepe nke ọhụrụ Fenix ​​igwe kwụ otu ebe, anyị ndammana malitere na nke ugbu a Fenix ​​SL nlereanya na chọrọ ka mma na bike enweghị ida ọrụ na Njirimara na-ama mere ka nke a etiti ndị dị otú ahụ a benchmark etiti na ahịa.
Olee otú nke ahụ ga-esi kwe omume? N'oge mmepe, anyị lekwasịrị anya n'ihe atọ dị iche iche: Nke mbụ, anyị chọrọ ịchekwa ahụmịhe ịnya anyịnya igwe na ọbụnakwa meziwanye ya site na enyemaka nke ahụmịhe na ọhụụ nke anyị webatara na Noa Fast na Helium SLX. Nke abuo, na Ridley anyi nwere otutu ihe omuma aerodynamics nke na enyere anyi aka ime Fenix ​​otu n’ime ndi mmadu ndi nwere ntachi obi n’elu ahia. N'ikpeazụ, ọ dị anyị mkpa na anyị nwekwara ike iwebata Fenix ​​n'ime mmemme mmemme anyị, n'ihi na anyị hụrụ na ọtụtụ ndị ahịa na-achọ ịhọrọ atụmatụ agba nke ha ma ọ bụ gbanwee imewe ha iji mepụta igwe nke aka ha.
Ndị bụ isi ihe atọ bụ isi na-elekwasị anya mgbe anyị mepụtara ọhụrụ a Fenix ​​igwe kwụ otu ebe. Ọ dị mma, ugbu a, ka anyị lebakwuo anya na Ridley ọhụrụ Fenix. Ugbu a, ka anyị lebakwuo anya na Ridley ọhụrụ Fenix, bido na ndozi ikuku.
Imeziwanye igwe na-arụ ọrụ igwe kwụ otu ebe bụ otu n'ime nnukwu nsogbu na ịmepụta igwe ọhụrụ Fenix ​​a. Aerodynamics dị anyị ezigbo mkpa, ọbụlagodi na ọ na-esiri ike mgbe ụfọdụ ịkọwa ya, n'ihi na mgbe ị na-ekwu maka mbenata ibu nke gram 100, onye ọ bụla maara ihe gram 100 karịa ma ọ bụ obere. Mgbe anyị na-ekwu maka mmụba 10W na arụmọrụ na igwe kwụ otu ebe, ọ na-esiri ya ike ịkọwara ndị mmadụ ihe ọ bụ, ọbụlagodi na mmezi aerodynamic nwere mmetụta dị ukwuu na arụmọrụ nke igwe kwụ otu ebe na onye na-agba ya karịa, sịnụ, 100 gram iji chekwaa na igwe zuru ezu.
N'ezie, na Ridley anyị nwere ọtụtụ ihe ọmụma dị elu nke anyị nwetara site na ịmepụta ụdị ịnyịnya ígwè Noa dị iche iche na Noa Fast ma anyị jiri ihe ọmụma ahụ wee hazie ihu nke etiti nke Fenix ​​ọhụrụ a ebe anyị nwere ike iwebata ihe niile Gịnị kpọmkwem na etiti. Anyị na-eji teknụzụ F-Steerer maka mwekota a, ndụdụ nwere eriri steepụ D nke na-eme ka anyị nwee ike ịpụ eriri ndị ahụ kpọmkwem site na ọdụ ụgbọ mmiri banye na etiti ahụ. Kokpiiti onwe ya egosiworị ya aerodynamic uru na nkasi obi na Noa ngwa ngwa na anyị na-eji profaịlụ ha, nke dabere na mkpụmkpụ NACA profaịlụ.
Ihe aka ahụ ruru bụ 75 millimeters na dobe bụ 130 millimeters. Yabụ kedu ka i siri melite ahụmịhe ederede? Ahụmahụ ịnya ụgbọ ala maka anyị bụ nnoo banyere ịchọ nkasi obi kachasị mma, nkwesi olu ike na nzaghachi. Anyị na-ama nwere nkasi obi nke azụ triangle, ahụkarị Ridley diamond udi na Nchikota na ala mgbodo maka a n'ezie stiif mmetụta na igwe kwụ otu ebe na ndị a bụ maa atụmatụ na anyị achọghị ida mgbe na-emepe emepe ọhụrụ Fenix.
Ọ bụ ezie na anyị ahụla n'ime afọ ole na ole gara aga na ndị mmadụ na-etinyekwa mmesi ike na nzaghachi nke igwe kwụ otu ebe, anyị mepụtara ọhụụ ọhụụ ọhụụ dabara na etiti Fenix, nke na-enye ohere maka njikwa na njikwa. mma n'iru mmetụta. Nke a na - abawanye nzaghachi nke igwe kwụ otu ebe. Site na mmetụta ọhụrụ a, anyị na-ewere ahụmịhe ịkwọ ụgbọala na ọkwa ọhụrụ, ọkwa dị elu karịa nke ọ nwere na Fenix ​​SL.
Ọ dị mma, nke ahụ na-akọwa mmeghachi omume nke igwe kwụ otu ebe, mana olee otu ị siri mee ka nkasi obi ghara isi ike? Iji mee nke a, anyị kwesịrị ịdọrọ ahịrị site na ọkpọ isi okpokoro na ọdịda azụ nke etiti ahụ na-ekewa etiti ahụ abụọ. Emere akụkụ ala nke etiti ahụ iji bulie nnyefe ike, a haziri akụkụ elu nke etiti ahụ iji nyekwuo nkasi obi nye onye na-agba igwe. Akụkụ ala nke etiti ahụ na-eme ka mgbanwe ọhụụ ọ bụla gbanwee n'ime ọsọ.
Kedụ ka ị si hụ nke ahụ n’ebe ahụ? Ọ bụrụ na anyị amalite na ngwụcha ihu igwe kwụ otu ebe na etiti ahụ n’isi ọkpọ ahụ, ị ​​ga - ahụ na anyị na - eji ọkpọ okpu karịrị akarị. Oversized isi tube pụtara na ị na-eji mgbanaka buru ibu na ala nke isi ahụ karịa mgbanaka dị n'elu nke isi ọkpọ ahụ. Na mberede, Ridley bụ otu n'ime ụdị izizi ịmebata oversized tube n'elu igwe ịgba ọsọ.
Igwe mkpuchi a dị elu na-enye igwe kwụ otu ebe ọzọ, nke ị na-eche ọkachasị mgbe ị na-aga ngwa ngwa, na nnukwu ọsọ na mgbe ị na-aga. Nke a na-enye gị a karịsịa anụ na ala mmetụta na eku. Mgbe ahụ, mgbe ị gbadara wee lelee nnukwu tube nwere okpukpu abụọ jikọtara ya na nkwado BB 86 na oke oche dị egwu.
Ihe atọ ndị a na-enye aka na nnukwu ike nnyefe nke etiti. Nke a na-eme ka ị na-eche dị ka ọ bụla pedal ọrịa strok ị na-eme na-ozugbo agbanwe n'ime ọsọ na nke ahụ bụ isi ihe onye ọ bụla na-achọ na a n'okporo ụzọ igwe kwụ otu ebe, na ị na-eche dị ka igwe kwụ otu ebe zaa ozugbo mgbe ị na-etinye ụfọdụ ike nye pedals. So ọkara nke igwe kwụ otu ebe na-enye nkasi obi? N'ezie, ọ bụrụ na anyị alaghachi na njedebe ngwụcha nke igwe kwụ otu ebe na ọkpọkọ isi, ị nwere ike ịhụ nke ọma na ọkpọkọ elu nwere ntakịrị domed.
Igwe elu dị oke buru ibu ma buru ibu n'akụkụ mpaghara tube isi. Nke a dị ka m kwuru na m ga-enye ọkpọ tube isi. Nke a na-enye igwe kwụ otu ebe obi siri ike ma nwee ntụkwasị obi mgbe ị na-agba ọsọ ọsọ ọsọ, na ọdịdị nke ọkpọkọ ahụ na-agbanwe ka ị na-agakwu n'ihu C-tube, na-eme ya gburugburu na obere mkpa.
Slightlydị nke a na-atụgharị n'elu nke ọkpọkọ ahụ na-arụ ọrụ dị ka akwụkwọ mmiri na-eme ka mmiri ghara ịdị n'okporo ụzọ ọjọọ. Anyị na-eji tube oche 27.2 millimita, nke na-enye aka iwepụ vibrations n'okporo ụzọ.
Mgbe ahụ ọ bụrụ na anyị ele anya n’azụ igwe kwụ otu ebe, ịnwere oche na oche oche ahụ dị oval. Odị oval a na-emepụta nguzozi zuru oke n'etiti isiike na nkasi obi. Odị oval na-enye triangle azụ ọtụtụ nkwesi mpụta, nke na-agbanwegharị ike ị na-etinye na pedal ahụ wee rute n'azụ ụkwụ n'ime ọsọ.
N'otu oge ahụ, oval udi na-enyekwa ụfọdụ vetikal Flex, nke na-enye igwe kwụ otu ebe ọzọ nkasi obi na oké ịnyịnya ahụmahụ nke Fenix. Na mkpokọta ya: ọhụrụ Fenix ​​bụ kacha ntachi obi bike maka roadies na a zuru okè mix nke nkasi obi, isi na reactivity. Echere m na ọ bụ igwe kwụ otu ebe zuru oke maka ụdị ndị na - agba ịnyịnya, site na nnukwu onye na - agba ịnyịnya na onye na - agba ịnyịnya na onye na - agba ịnyịnya egwuregwu? N'ezie, ọ bụrụ na m ga-ahọrọ igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ etiti site na Ridley zuru oke nke m ga-eji na ebe niile dị iche iche n'afọ, ọ ga-abụ igwe Fenix ​​ọhụrụ ahụ.
Ọ ga - enyere m aka ifefe n’elu okwute ndị ahụ na-eme njem nlegharị anya nke Flanders, m ga - emeri mmeri ikpeazụ m ga - aga n’ụtụtụ Sọnde m ma ọ ga - enyere m aka ịrị ugwu kachasị elu na njem Grand Fondue m na-eme kwa afọ. Nke a bụ n'ezie ahụmịhe ịkwọ ụgbọala gbara gburugburu ị nwetara. Ngwakọta zuru oke nke nkwesi ike, nkasi obi na mmeghachi omume.
Na Ridley ọ dị ezigbo mkpa na ị nwere ike ịhọrọ agba nke igwe kwụ otu ebe gị onwe gị. Fenix ​​ọ ga-adị na agba na aghụghọ ndị ọzọ? Ee, n’ezie, lee ịnyịnya ígwè abụọ a. Ndị a bụ ihe atụ nke igwe kwụ otu ebe na agba nchịkọta ọkọlọtọ anyị, mana Fenix ​​ga-adịkwa na mmemme Pure Line anyị, ebe ị nwere ike ịhọrọ n'etiti atụmatụ asaa dị iche iche yana agba agba 42.
Nke a na-enye gị ọnụ ọgụgụ buru ibu nke njikọta yana enwere ijikọ n'aka nke ga-adabara gị nke ọma. Na nchikota ya: Ridley ọhụrụ Fenix ​​bụ ihe kasị aerodynamic ntachi obi igwe kwụ otu ebe na ahịa na a zuru okè ngwakọta nke nkasi obi, reactivity na isi ike. Ọ bụ igwe kwụ otu ebe maka ụdị ndị na-agba ịnyịnya ma ị nwere ike ịhọrọ imewe gị na agba gị.
Daalụ maka ikiri ma nwee njem obi ụtọ!
Ebee ka eji eme igwe keke Ridley?
Nke a bụ Ridley Noah Fast si Caleb Ewan. Ewan n'onwe ya sonyeere ndị agha Lotto Soudal maka oge 2019 ma buru ụzọ gbafere ndị otu Mitchelton Scott. Ka anyị hụ ihe pụrụ iche banyere igwe kwụ otu ebe a maka onye na-agba ịnyịnya na-amasị m ịkpọ Pocket Rocket. (upbeat dijitalụ egwu) Ya mere, nke a bụ ihe kachasị ọhụrụ nke Ridley's Noah frame.
Ugbu a bụ nke aerodynamic n'okporo ụzọ ọduọ bike àjà. M n'ezie nwere otu n'ime ndị mbụ ụdị ha mere na ọ bụ a ibu stiif igwe kwụ otu ebe na integrated oche posts niile ma mgbe ọtụtụ igwe kwụ otu ebe na-eme ka o yiri ka ha pụọ ​​a ụdị technology, e nwere ụfọdụ n'ime ha ka sere n'elu gburugburu, ma ọ bụ Ọ na-atọ ụtọ ịhụ na ọ gafeela n'ihi na ịnwe oche oche dị iche iche nwere obere nkasi obi ebe ahụ na njedebe azụ. Ọtụtụ afọ ọ bụ ndụdụ nwere oghere ma na-etinye brekị n'ime ya.
Ugbu a, ọdịiche dị na ndụdụ ahụ kwesịrị ịnwale inyere ikuku ma ọ bụ ikuku ikuku aka igwe kwụ otu ebe iji mee ka ị na-aga, nke ọma, obere watts echere m, agbanyeghị na ewepụrụ ya ma jiri ihe a na-akpọ F-Surface technology dochie ya. Ugbu a, eji ya na ụdị ndị gara aga nke igwe kwụ otu ebe Ridley. Ya mere ebumnuche nke F-Surface bụ iji kwe ka ifufe na ikuku na-asọba n'elu tubes - karịa ka ọ dị na mbụ, yabụ ị nwere ike ịgba ọsọ ọsọ karịa ogologo oge ma ọ bụrụ na ịchọrọ.
Ugbu a, ọ bụ otu ụkpụrụ ahụ ma ọ bụ echiche anyị na-ahụ na bọọlụ bọọlụ na mgbịrịgba dị na ha, gụnyere ihe anyị na-ahụ n'ụfọdụ akpụkpọ anụ kacha elu na nku ụgbọ elu kwa. Ọ bụrụ na anyị lelee anya ebe a, ị ga - ahụrịrị ihe na nsọtụ ndụdụ ahụ Ridley kpọrọ F-nku. Ugbu a, echiche dị n’azụ ihe a yiri ihe anyị na-ahụ na Pinarello Dogma nakwa na Scott Foil.
Ebumnuche dị n’azụ ya bụ iji belata ọgba aghara nke ihu ihu na -emepụta ka ihu igwe kwụ otu ebe dakwasị ezi ikuku nke ikuku. Yabụ ndị na-agba ọsọ dị ka Ewan na-ahụkarị ikuku na mbara igwe ma a bịa na mbara igwe. N'ọgụ maka mmeri mmeri, ha na-achọ ịhapụ ihe ọ bụla na-enweghị isi.
N'ihe Ewan, ọ ga-adị oke ala, mana leleekwa aka ndị ahụ. Yabụ na ọ bụ Deda Superzero, nke nwekwara profaịlụ ihu igwe dị ntakịrị, naanị maka obere uru. Mgbe ahụ, eriri ndị ahụ gbanyere mkpọrọgwụ nke ọma na mgbe ahụ eriri EPS maka igbe eletrọniki, nke ahụ na-ekpo ọkụ dị ka ihe ọ bụla m hụtụrụla mbụ.
Emeela ya ọfụma, ọ dịka ọ dịka ha mere, esoro m ya ruo ụlọ mmanya niile. Ya mere aga m ekele Steven onye na-arụ ụgbọ ahụ bụ ezigbo enyi m. Mee ezigbo ọrụ ebe ahụ, ezigbo ọrụ Steven.
Ugbu a ekwuru m na mmeghe na Ewan nọ na otu ọhụụ ọhụrụ na nke ọma, ọ bụ onye pụrụ iche na ihe ebe a, n'ihi na nke a bụ Campagnolo Super Record EPS na 12-ọsọ, ihe a na-ahapụbeghị n'ezie. Ugbu a, ọtụtụ n'ime unu nwere ike icheta 'na m mere n'ezie na Vuelta a Espana na 2018' n'iji ugo anya m wee chọpụta na Maxime Monfort nwere ụdị nke otu a na-agba. Ọfọn, ọ dị mma ịhụ ebe a na akara ngosi Super Record na akụkụ ndị a na-ekwu wee gbakwunye na cassette 12 ahụ ọsọ ọsọ? Ọ dị mma na ọ bụ ezé iri na isii.
Ọ na-amali site na 15- ruo 17-gear, ebe ugbu a anyị nwere 16-gear nke enwere ike iji ya nke ọma n'ihi na ọ nọ ebe ahụ, na ala nke njedebe agbụrụ nke cassette ma ọ bụrụ na ịchọrọ, mana ọ ga-enweta bara uru ka m chere. Ugbu a, m na hụrụ ihe banyere nke a igwe kwụ otu ebe nke bụ nnọọ jụụ na ihe i nwere ike ime na electronic iche iche ka n'ezie ịgbanwe shifting ihe nakawa etu esi nke bike. Ya mere, gịnị ka Caleb Ewan mere na sekit ya mgbe ahụ? Njikwa? Ọfọn, n'ihi na o jiri Shimano mee ihe mbụ, enwere m ike ịhụ echiche ya n'azụ ya, ọ gbanwere ya ka ọ bụrụ na ọ bụ aka na-ada na ọ ga-abụ na ọ dịkarịa ala na-eche na ọ bụ ya mere o ji mee ka ọ dị ntakịrị mfe karị, n'ihi na n'ezie na Campagnolo , dịka ọmụmaatụ ka ịgbanwee na nha 11-ezé, ọ bụ obere mkpịsị aka ntụgharị ebe a n'ime ime mkpuchi.
Yabụ ọ bụrụ na ị na-eji otu ntụgharị ihu igwe mgbe ị nọ ebe ahụ na tụlee, ọ dị mfe karịa ịgbanwe gia, yabụ ọ gbanwere ya ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka nke ahụ dị n'aka nri ọ gbanwee na ngwa siri ike, ya mere na 11-sprocket, ma ọ bụrụ na ọ na-eji ntụgharị mgbanwe n'aka ekpe, nke ọma, ọ na-aga 29-ezoro ezé. Ma mgbe ahụ, mkpịsị aka ukwu gbanwere n'ime mkpuchi ahụ, ọ gbanwere ya, yabụ nke ziri ezi na-akpali ya na obere mgbanaka mgbanwe na nke aka ekpe na-akpali ya na nnukwu eriri. Aga m anwa ịnweta okwu ole na ole site na Caleb ma gbalịa ịchọpụta ihe mere o ji mee ya, mana ọ dịkarịa ala otu ahụ ka m chere.
Nhọrọ wheel, nke ọma, Ewan, ọ na-agagharị na ebe a na Tour Down Under na otu ụzọ ụkwụ Campagnolo Bora Ultra 50. N'ezie, nke a nwere ike gbanwee dabere na mbara ala ị na-akwọ. Ha nwere seramiiki arụnyere na mgbe ahụ, maka taya, anyị nwere taya taya nke Vittoria Corsa, 25 millimeters n'obosara, ọ na-amalite ma n'oge a ma emesịa iji hụ ma nyochaa ihe ọ mere ọ chọrọ maka Campagnolo crankset na Ngwa SRM, nke a na-etinye ebe ahụ n'ezie na Ududo.
Chainrings, 53/39, ma ọ bụrụ na anyị anya nke ọma, naanị zoro n'okpuru ndị a yinye ma ọ bụ n'ime ha, anyị nwere ike ịhụ a K- Edge yinye catcher na a magnet na njedebe na nke ahụ bụ ịhụ cadence nke. N'ezie na-akpali ma ọ bụ mma ịghọta na crank mgbe pedaling. Ihe mkpuchi 170 millimita ndị a nwere ụzọ abụọ ele anya na Keon Carbon Blade na-eji agụba 20 Newton, ya bụ voltaji tọhapụ.
Ya mere, ọ gara maka ihe kachasị n'ihi na n'ezie, mgbe ị nọ n'oge okpomọkụ nke oge ị na-alụ ọgụ maka mmeri, ị chọghị ịdọpụ ụkwụ gị, ọ bụ? Mba ị dịghị. Nri, mgbe ahụ ka anyị lelee mmecha aka na ọgba tum tum ahụ. Ọfọn, nke mbụ, ebe azụ ya nọdụrụ na Selle Italia Team Edition carbon saddle.
N'ezie, ụgbọ ala carbon na-azọpụta obere ibu ebe ahụ. Ma azuokokoosisi ahụ, anyị ekwuolarịrị banyere njikwa ahụ, mana e wuru ha n'ime okporo osisi Deda Zero 100, nke bụ 140 millimita n'ogologo, ogologo ogologo, yana akụkụ nke mwepu 20, yabụ otu n'ime steepụ kachasị elu anyị Aga m ahụ na World Tour peloton. Anyị na-ahụ ọnụọgụ abụọ nke mwepu 17, mana mwepu 20, nke ahụ bụ mbinye aka nke Deda, ma n'okpuru mgbati ahụ anyị nwere 3D edere ederede isi mkpuchi, ma ọ bụ ezigbo mara mma na-achọ nke ahụ, nnukwu onye na-akwado ụdị ihe ndị a kwuo.
Handlebar teepu, anyị nwere Lizard Skins DSP teepu nke naanị 3/4 fụchiri ma na-efu site na elu akụkụ dị ebe ahụ. Ma mgbe ahụ, anyị nwere ụfọdụ brek Campagnolo Direct Mount brekị nke na-eji kposara abụọ karịa nke ị hụrụ na ntọala ọdịnala. Otu ụzọ Tacx carbon fiber karama.
N'ezie, n'ịnyịnya na njikwa Deda ndị a, anyị nwere SRM PC8 powerplant nke dị na agba uhie uhie mara mma nke ọma, mgbe ahụ ekwesịrị m ịsị na oche oche dịkwa iche na Ridley Noah Fast, ọ nwekwara nke ahụ F -Surface teknụzụ dị n'ime ya iji mee ka ikuku ahụ dị nro, wee nwee ike ịhụ azụ agbụrụ Caleb Ewan si asọmpi agbụrụ nke Australian National Road, nke mere naanị ụbọchị ole na ole gara aga, nke ahụ dịkwa mma abụọ. teepu n'azụ oche oche. Enweghị ihe ọ bụla na-enweghị isi ma ọ bụ ihe ọ bụla site na isi nke sadulu ahụ ruo n'etiti ntọala mgbodo 64.5 centimeters.
Ebe dị anya site na nsọtụ sadulu ahụ ruo etiti etiti ahụ bụ sentimita 52.2 na dobe si na sadulu ahụ bụ 6.5 centimeters na ibu bụ kilogram 7.27.
Okay, okay, amam na ihe masiri gi free wheche soundcheck ezigbo. Ka anyị gee ntị. (Soft pịa) (ọsọ ọsọ) N'ihi ya, anyị nọ, igwe kwụ otu ebe nke 2019 onye bịara ọhụrụ maka Lotto Soudal, Caleb Ewan.
Ka m mara Ma ihe ị na-eche banyere ya na-aza ajụjụ n'okpuru. Onwe m, ọ ga-adị m mma nke ukwuu. O nwere taya taya roba, ka emechara.
Echefula ileta ụlọ ahịa GCN na shop.globalcyclingnetwork.com, ebe anyị nwere ọtụtụ ihe ọma maka gị.
Ma ugbu a maka nnukwu ederede ọzọ, kedụ maka naanị ị pịa ebe a?
Onye na-eme Eddy Merckx?
S.A.Ihe omume Eddy MerckxIgwe igwe N.V., nke amara nke ọma dikaEddy Merckx, bụ a Belgium ika nke elu ọgwụgwụ ụzọanyịnya igwe, bụ nke onye bụbu ọkachamara n'okporo ụzọ ịgba ígwè malitereEddy Merckxna 1980. A na-ahụta ka ọ bụrụ otu n’ime ndị kacha ama amaigweụdị n'ụwa.
Eddy Merckx, onye ọtụtụ mmadụ na-ahụta dịka onye kacha gbaa agba ịnyịnya ígwè n’oge niile. O meriri ihe niile. Mmeri ya gụnyere sprints, ọnwụnwa oge, ndị bịara nzukọ, nnukwu njem 11, ihe ncheta ise niile, asọmpi atọ nke ụwa, ọmarịcha agbụrụ ọ bụla otu ụbọchị, yana ịmeri mmeri na egwu ahụ.
M, n'aka nke ọzọ, meriri raffle otu ugboro, enwekwara m baajị 50 m. Ma mgbe m nwere ike ịgba ịnyịnya ígwè, enweghị m ike ịme ya ọfụma dịka Eddy kwuru, Abughi m onye kachasị ezinụlọ m ọsọ. Agbanyeghị, ndepụta nke rụzuru Merckx akwụsịghị ebe ahụ.
N’afọ 1972, o debere akara elekere. Ihe ịma aka dị mfe. Ruo ókè hà a canaa ka mmadụ ga-agagharị na velodrome? Oge awa? Echere m na ọ bụ Eddy Merckx ya mere ọ setịpụrụ ndekọ ụwa ọhụrụ 49 kilomita 431 mita.
Ihe mere Merckx ji bụrụ ihe na-adọrọ mmasị karị bụ na ọ mere ya na nke a, ejiri ya na ọkpọkọ, nchara, okpokolo agba, yana ogwe osisi, yana enweghị akara akụ iji kwuo. Ọ bụ omenala ma de de Colnago nke Ernesto Colnago mere n'onwe ya. Na na 72 nke a bụ ihe ọhụrụ.
O were awa 200 ma ọ dị naanị 5.75 n'arọ. Echere m na ọ dị ịtụnanya mana ebe ọ bụ na 72 ọ na-aga n'ihu na teknụzụ na akụrụngwa a na - apụghị imeri emeri, nke mere na ihe ndekọ 2019 Victor Campenaerts bụ 55 kilomita na 89 mita.
Make na-eme m ka m chee echiche mgbe ị na-eji teknụzụ kachasị elu na nke kachasị elu, sayensị egwuregwu, ndị nkuzi ọkachamara, usoro mgbake ọhụụ na ọzụzụ, nwere ike, merie onye na-enweghị atụ, (ụkwara), m, nke kachasị oge, Merckx? Gbalịa ndekọ oge elekere ma hụ ma m ga - emeri Eddy Merckx. Ọ bụ ezie na atụmanya nke ịga gburugburu dị ka ọsọ ọsọ dịka ị nwere ike maka otu awa dị mfe, ozugbo ị gbajiri ya, nwoke dị ka m ga-aga 49 na ọkara kilomita n'ime elekere, aga m achọ ya niile Enyemaka m nwere ike nweta. Ya mere, ebum n'uche m bụ ịmata ihe ịma aka ahụ wee mata ihe ịma aka ndị dị na ya wee gbara ndị ọkachamara na ndị kachasị mma na akụrụngwa kachasị mma iji merie nsogbu ndị ahụ - aga m achọ onye na-enye ọzụzụ, ezigbo mmadụ na-eme nke ọma.
Ekpebiri m ịkpọtụrụ Neal Henderson. Maka ndị gị na-amaghị, ọ bụ onye ọkà mmụta sayensị egwuregwu na onye nchịkwa ụwa maka ndị egwuregwu egwuregwu. Neal bu onye isi ndi Sufferfest Sports Science Division na onye guzobere Apex Coaching na Consulting na Boulder, Colorado.
Na mberede, ọ na-azụkwa otu nwoke aha ya bụ Rohan Dennis. N'ụzọ dị oke egwu, ọ kụziri Rohan Dennis na Bradley Wiggins, awa abụọ nke ihe ịga nke ọma. Neal kwukwara na m ga-ewepụta ọkachamara nke onye na-enyere ya aka Mac Cassin, onye dị ka onye ọkà mmụta sayensị nwere ike ịnye nghọta dị oke mkpa banyere otu kachasị mma isi gbanwee usoro ọmụmụ m ka m jiri ụkwụ gafere otu elekere.
Tupu anyị agaa n'ihu, Neal gwara m ka m mee ahụ ike. Nke a bụ iji hụ ebe m nọ ugbu a n'ihe gbasara ahụike, kamakwa iji hụ ma enwere ohere iji maa aka. (Techno upbeat music) Ule a bụ Sufferfest 4DP Full Frontal.
Nke a bụ ule zuru ezu karị na ọkaibe na ọkọlọtọ 20 nkeji FTP bọọlụ na mgbidi. Ma ị nwere ike icheta na Lloyd mere otu ule ahụ mgbe ọ mere ka o nwee ike ịnata, na nsonye 4 nke izu izu Mac, ọtụtụ ihe gbasara physiology m, ọ gụnyere di na nwunye asaa kachasị elu anyị, nke ise na-esote. nkeji max mgbalị, ise nkeji ezumike, mgbe ahụ ka a 20 nkeji zuru trotul FTP mgbalị na a na-atọ ụtọ otu nkeji max mgbalị maka eji megharịa ọnụ. Tọrọ ụtọ tọrọ ụtọ.
Ihe kpatara nke a bụ ịchọpụta anaerobic, neuromuscular, max aerobic, arụmọrụ m dị n'ọnụ ụzọ. Site na ozi a, Neal na Mac nwere ike ịchọpụta ihe m chọrọ ma mezie ọzụzụ m. Na mgbakwunye, mgbatị kachasị nkeji ise nke na-abịa naanị nkeji ise tupu mgbatị nkeji 20 kwesịrị ịtọpụ ụkwụ m n'ahịrị, nke bụ nnukwu ihe ezi uche dị na ya bụ uru uru FTP bara. (Techno upbeat music) Ọ dị nkeji iri abụọ, ọ ga-esiri ya ike ugbu a, emesịa ise a, yabụ enweghị ọkwa. (Techno upbeat music) Nke ahụ jọgburu onwe ya.
Enwere m ọtụtụ obere. (Techno upbeat music) Obi dị m ụtọ na nke a agwụla. M screwed elu nkeji nke mgbali na njedebe, m pedal wee pụta, ọ gbanwere fleets.
M siri ike. Gbalia ihu na Neal mara maka na odighi m acho iru ule ahu niile ugbua. Mana Neal ga-elele nsonaazụ ya wee jiri ya chọpụta etu anyị siri melite arụmọrụ na ọzụzụ maka ọdịnihu.
Ya mere, m ga-akpọ ya mgbe e mesịrị. Ọ dị njọ. Ugbu a, ọ bụrụ na ị nweela mmasị na nkwụnye ego m na Bank of Pain Faces biko nye isiokwu a, isi mkpịsị aka, nsonaazụ m maka ule ahụ bụ ndị a.
Ya mere, sprint m bụ ihe nhụsianya, 760 watts sekọnd ise nke ike, mana eziokwu bụ, Anọghị m na-agba ọsọ n'afọ niile, yabụ ọ bụ ihe a ga-atụ anya ya. Ọrụ m nkeji ise ka mma, nke ahụ bụ 376, ọ bụ ezie na nke ahụ pere mpe karịa m ga-atụ anya n'okporo ụzọ, mana nke ahụ bụ ụdị onye na-azụ turbo nkịtị dịka a tụrụ anya ya. My 20 nkeji bụ na mma m 1 nkeji arụmọrụ mebiri n'ihi na, dị ka ị na dị nnọọ ka ị hụrụ, arịọ m mgbaghara.
Ọfọn, na ihe niile a kwuru, nsonaazụ na-akọwa m dị ka ịchụ, nke na-akpali m, Rohan Dennis na Bradley Wiggins bụ chasers. Ma eleghị anya, olileanya ka dị, mana m ga-enwe mkparịta ụka na Neal na Mac ugbu a wee hụ ihe ha nwere ike ikwu na nsonaazụ ndị a, yana faịlụ ọzụzụ m gara aga site na afọ ole na ole gara aga. Mac, Neal, ọ dị mma ịhụ gị abụọ.
Daalụ maka isiokwu ịkpọtụrụ m. Ya mere emere m ule m 4DP. Nye m ozi ọma na akụkọ ọjọọ. (ma ọchị) Gịnị ka nke ahụ pụtara? - Dị ka anyị chọrọ ịhụ ebe ị nọ n'ihi na anyị doro anya na anyị maara ihe ndekọ anyị, ihe mgbaru ọsọ bụ iji nweta ike gị, n'ụzọ dị elu dị ka ọ nwere ike ịga.
Ọzụzụ ị ga - eme maka nke a dabere n'ezie ebe mbido gị na nke ahụ bụ nnukwu ihe gbasara ịmalite na profaịlụ a sara mbara. - Ihe anyị na-ahụghị mgbe anyị na-eleba anya na ụkpụrụ bụ ihe ngosi. Yabụ ọ bụrụ na ị na-eche banyere ndekọ oge elekere na ihe na-eme na egwu ahụ, mgbe ahụ ị ga-anọ n'ịnyịnya igwe kwụ otu ebe na enweghị ngbanwe ọ bụla.
A gaghị enwe ụsọ osimiri ma yabụ na nnọchi anya bụ n'ezie ezigbo ihe kpatara ya. Na gị neuromuscular elu arụmọrụ, ị gafere otu horsepower, n'ihi ya, ị mere ka 760 watts, ihe ị maara, otu horsepower bụ 746, ya mere, ọ dị mma maka gị. Averagedị ndụ gị ruru maka sekọnd anọ na ise.
Mgbalị ahụ bụ 105 rpm, nke dị mma. Ọ bụghị ngwa ngwa, ị ga-edebe ihe dị nso na ya maka oge zuru ezu, yabụ kama ịme nke ahụ maka sekọnd ise maka 3600 sekọnd na otu, ị maara, obere obere, nke ọma, ihe na-erughị ọkara elekere. Yabụ chee banyere ike ịgba ọsọ ọtụtụ mmadụ, ị maara, ike kachasị elu dị n'etiti 100 na 130 RPM, yabụ ugbu a ị nọ n'akụkụ ala nke nzuzo.
Yabụ na anyị ka nwere ọrụ anyị ga - eme iji nweta ike na ogo dị elu karịa gị na ikike anaerobic gị na nkeji oge ma ọ bụ karịa ma ọ bụ 47 sekọnd ya, ị ruru 87 RPM wee laghachi ntakịrị ị maara na ị na-agba ọsọ ebe a n'ime oge oyi. ọnwa na ya mere anyị ga-eme ihe dị mma n'ime gị n'ime izu, zụọ azụ site na Mọnde ruo Fraịdee, ntakịrị n'ime ụlọ na kicker na ụdị mgbalị a kpọmkwem na igwe TT na ọnọdụ a. Ma site n'iji ya tụnyere, olu gị nwere ike ịdị ntakịrị ala n'izu ahụ, agbanyeghị na anyị ga-ewepụtara gị ụbọchị abụọ ụbọchị yana, ị maara, ga-enye ụfọdụ mmezi enwere ike anyị ga - erite na otu anyị si egwu ha pụta ma mejuputa ha ma na ngwụsị izu na-enwe obere oge n'ozuzu, ị maara, ị gaghị eme draịva isii ma ọ bụ asatọ, ee e. Echegbula, ọ bụghị epic, mana ị ga-eme njem dị ogologo karịa ma anyị ga-eme ka gị na ndị otu na-eme otu ndị otu ị nwere na Satọde, ọ bụghị kwa izu, ma ọ ga-abụ akụkụ nke ihe.
Ka anyị hụ, anyị kwuru ntakịrị banyere ike, kedu maka yoga na ọzụzụ ọgụgụ isi? ? You tinyela aka na mpaghara ndị a na nkọwa ọ bụla ma ọ bụ n'ụzọ ụfọdụ na ọzụzụ gị n'oge gara aga? - Ee e, ma ọlị. Emere m obere yoga ma gbaa abụọ ọzọ mgbe ọ dị m ka m siri ike. Ma abụ m, ee, naanị iji gbatịa na ihe ndị yiri ya.
Ma ee, enwere m oghe nye ya, ọ dị m ka ọ dị m mkpa ịgbatị karịa mgbe m na-eme ọnọdụ a maka oke ego - Ọ dị mma ịpịa ma jide ọnọdụ ikuku dị mma na onye na-azụ ọzụzụ maka sekọnd atọ , ma ozugbo ị na-eme nke a maka awa zuru ezu na nkwụsi ike mpikota onu n'ezie ponentof ga-akwọ ụgbọala na-abụghị nke njikwa. Ọrụ dị iche iche. - Ọfọn, ọ bụrụ na anyị eleba anya n’ihe dị ka izu iri na abụọ, anyị gaferela awa 5000 ịhapụ ịnwale ogologo oge gị, ntakịrị oge iji rụọ ọrụ mana ọ bụghị oge dị ukwuu ịla n’iyi.
Ya mere, anyị n’ele anya ịkpọrọ gị gaa ebe ị ga - emeri nnukwu Eddy. - Cool, aka nri. Yabụ, echere m na m ga-akpọtụrụ unu na izu na-abịa.- Ee.- Anyị ga-aga n'ihu ọzụzụ ebe a.
Ka ahụ ma emechaa. Soronu unu kparita uka. N'ihi ya, ozi ọma ahụ bụ na Neal na Machave mere ụfọdụ mgbakọ na mwepụ ma dabere na nsonaazụ m, ha chere na ka m na-adị mma, na-arụ ọrụ ikuku, ma na-agbanwe agbanwe ka m wee nwee ike nweta ihe kachasị na ọnọdụ TT ahụ na ọkwa dị elu, ọ bụ Ohere m nwere ike ime nke a.
Ugbu a, ha na-ekwukwa na Merckx mere atụmatụ na ọ ruru ihe dị ka 400 watts, nke dị ịrịba ama n'onwe ya, mana ọ ga-adị ịrịba ama karị mgbe ị tụlere na ọ mere ya na elu, nke na-eme ka atụmatụ a sie ike karị. Agaghị m adị elu, mana Mac na Neal gbakọọ na ọ bụrụ na m enweta ikuku, m kwesịrị iti 310 watts na nkezi, nke ahụ dị ka nke gị, mana tụkwasa m obi, nke ahụ bụụrụ m ọtụtụ ihe. Ime ule ndị mbụ ahụ na nkata na Neal na Mac gosipụtara ugwu dị n'ihu m.
Ọbụlagodi enyemaka kacha mma n'ụwa, enwere ike ịgbalịsi ike m rụtụrụla. Nzọụkwụ mbụ si ebe a bụ ịnọgide na-azụ ọzụzụ ma jiri ịnya ụgbọ elu dị elu ma tinye ike na ọnọdụ TT aerodynamic. M ga-emekwa ụfọdụ ule akụ iji chọta ọnọdụ m kachasị nke mere na ịdọrọ m ọnụọgụ nwere ike ịdị ala dị ka o kwere mee n'ihi na nke ahụ ga-adị oke mkpa, ọzụzụ m ga-abụ ngwakọta nke n'èzí na ime ụlọ n'ọdịnihu ma site na Neal na Mac nwere ahụhụ jiri obi ọma tinye ọzụzụ ha n'ime mgbatị m, nke dị m mma n'ihi na, dị ka ọtụtụ n'ime unu, m na-arụ ọrụ itoolu ruo ise n'izu ma ọ dị m mkpa ịdị na-arụ ọrụ oge, yabụ mmega ahụ dị n'ime ụlọ dị mma maka nke a dịka ọrụ m, kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị emere nke ọma n'ọfịs, na GCN Megabase HQ, nke ahụ bụ aha esQ.
Naanị oghere mgbu m ugbu a na n'ụzọ nkịtị ọtụtụ oge ebe a. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbaso usoro ọzụzụ m mgbe ahụ ị nwere ike ime ya, mana m ga-eme ọtụtụ ihe, ruo elekere 16 kwa izu ma enwere m ekele na ọ bụghị mmadụ niile chọrọ itinye oge ahụ. Ma echegbula, n'agbanyeghị oge ị chọrọ itinye ego, ị ka nwere ike ịme aka ịma aka gị n'oge Awa.
Naanị gaa na Passion Festival ma mee 4DP Full Frontal Test. Ma tinyezie ihe mgbaru ọsọ gị, ọ nwere ike ịbụ ihe ọ bụla naanị iji melite FTP gị, ma eleghị anya oge ikpele ma ọ bụ agbụrụ, ma ọ bụ ma eleghị anya ịchọrọ ịme PB na otu nnọkọ. Agbanyeghị, dị mee ya ma sonye ma jiri # SuffHourofPower.
Enwekwara atụmatụ izu nnwale nnwale kwa izu dị ezigbo mma nke agbakwunyere n'ime Ememe Passion. Ihe dị mkpa banyere Ememe Ọkụ bụ na ọ bụ atụmatụ ndị eji akwa akwa na profaịlụ gị nke ọ bụla. Ọ bụghị naanị ule ahụike.
Iji mee nke a n'ụzọ ziri ezi, ọ pụtara na ọ bụrụ na m weere ule FTP ọkọlọtọ wee wuo ya atụmatụ na ya, mgbe ahụ dịka anyị hụrụ n'isiokwu a, ikike ịgba m ọsọ bụ ụzọ dị ala karịa nkezi. (chịrị ọchị nwayọ) Nke ahụ pụtara na na nyocha FTP ọkọlọtọ, oge ịgba ọsọ na oge neuromuscular m ga-edo ga-esiri m ike ịmezu. Naanị n'ụtụtụ mgbe ị na-emega ahụ.
Enweghị m echiche ọ bụla, kwere m mgbe m kwuru otu nsogbu si sie ike na ha kwuru na ọ dị na ya. O siiri m ike Onye obula m gwara agwa na-amalite ndekọ elekere otu tupu ha ekwuo otu ihe. Emela ya.
Ọ na-ada ụda, ọbụlagodi Eddy merụrụ ahụ. O chere na ya ewerela afọ atọ nke ndụ ya. Onye nzuzu mana ị maara na ụjọ na-atụ m mana ọ nweghị ihe ọ bụla bara uru iji nweta ya dị mfe ma aga m eme ike m niile.
M ga-awusa na ya, aga m enweta ọzụzụ m wee nweta obere akụ, ihe kachasị amasị m ịme. Ka ọ dị ugbu a, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịdebe ọganihu m na mmega ahụ m niile, gụnyere ike na ọrụ yoga m ga-eme, gbanwee, a ga-eziga ya na Strava m ma enwere mmelite na Instagram. Yabụ enwere njikọ na ndị nọ na nkọwa dị n'okpuru.
Anyị ga-emekwa mmelite vlog kwa izu na GCN Show. Ya mere, denye aha, kpoo mgbịrịgba. Olileanya ịhụ gị n'oge na-adịghị anya.
Na-achọ m ọdịmma, m ga-achọ ya. Ka ọ dị.
Emere anyịnya igwe decathlon na China?
Naigwedịemepụtasite na ọtụtụndị na-emepụta iheke Asia ye Europe. N’afọ 2010, e bughaala otu obere ọgbakọ Ndịàmà Jehova na Frans. Ha na-erekwaigwe kwụ otu ebengwa na akuku maka onu ego.
Morningtụtụ ọma ụtụtụ ọma ụtụtụ ọma ụtụtụ, ezutere m ndị otu mix ebe a na Chengdu bụ nnukwu nnukwu ụlọ ahịa na mgbago ugwu ọwụwa anyanwụ nke obodo ahụ ma ọ masịrị m n'ihi na o nwere ụzọ ụgbọ oloko maka otu nke bụ nnukwu ụlọ ahịa na-ebubata. Starbucks enwere otu ihe ọzọ m batara maka taa ma ọ bụ ebe a na-akpọ Decathlon yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta akụrụngwa egwuregwu na Chengdu ma ọ bụ naanị China enwere ụlọ ahịa Decathlon na ụfọdụ obodo ukwu dị na Chengdu nwere n'ezie otu di na nwunye. ya mere ọ bụrụ na ịmaghị na ọ bụ akara french ọ bụ akara french ma ha nwere ike ire ụdị ngwa egwuregwu niile. Yabụ ka anyị lelee okpu ma hụ ihe ha nwere maka anyị.
Hapụ ya ka ọ bido, ee, mgbe ị banyere ị nwere ike ime ya ọfụma ị ga-ebu ụzọ hụ ndekọ ego wee nwee okpu anyị ma ọ bụ toboggans anyị ebe a. Otu enyi Ryan nke bi ebe a kwuru na a na-akpọ ndị a dị ka okpu ma ọ bụ ihe dị ka nke ahụ na Canada dị ka okpu a na-akpọ ha ihe mkpuchi, nke ahụ bụ ihe dị ịtụnanya Canada m nwere ike na enwere m ngwa skị gị n'ihi na ọ bụ ebe a na-akpọ Xiling Shan dị nso Chengdu otú i nwere ike na-eme atụmatụ otú e si aga snowboarding ka ha nwere niile gia ebe a, dị ka protein emee ka anya doo na Ogwe na ihe ndị dị ka na ọzọ skai stof ha ịgbanwe na oge ọ bụla ha n'ezie nwere obere ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe n'ebe ọ bụla ị nwere ike idozi igwe kwụ otu ebe na ịzụta ihe maka igwe kwụ otu ebe ma na-amasị m obere mpaghara a dị ka ụmụaka nwere ike ịbịa ebe a ma nwaa ịnyịnya ígwè ha nwere ike ịnya elu na ala rampi ihe dịka ị ga-ahụ ọtụtụ ụmụaka nwere skateboard na-enweta otu Skateboard ma ha ga-emebi gburugburu, ee ọ bụ naanị obere ụlọ ahịa n'ihi na ị nwere ike ịzụta ihe dịka uwe, ị nwere ike ịzụta ihe dị ka nke ahụ e nwere ike ịzụta ịnyịnya ígwè nwere ike ịzụta skateboards nwere ike ịzụta okpu agha zụta akpụkpọ ụkwụ ị nwere ike ịzụta ụdị ihe niile ma ọ dị ezigbo ọnụ ala. Themụ okorobịa ahụ meriri, ọ bara ezigbo uru n'ihi na ọ bụrụ na ị nwere ike ịnweta akpụkpọ ụkwụ dị ka nke a, ọ na-efu naanị 129 RMB A na m ekwu na ha anaghị enwe mmetụta dị ka nnukwu akpụkpọ ụkwụ mana nke ahụ bụ ihe dịka $ 20 ma ọ bụ na echeghị m obere, ugbu a na mgbanwe ahụ ọnụego maka otu akpụkpọ ụkwụ okayer nke 149 dị ka akpụkpọ ụkwụ m nwere n'ezie azụrụ m ebe a.
Pughi ihu, ee ndia bu nani 250 yen ma o bu ya mere na nke ahu adighi oke onu ii ma ha di ezigbo nma. Ọ na-adị ha ezigbo mma, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ụlọ ahịa akpụkpọ ụkwụ yiri ya ebe a, m ga-akwado nke a, ana m atụ aro na echeghị m ihe m ga-ahụ, echere m na ị gafere n'akụkụ na Noise bụ ee, obere mkpọtụ ahụ na-akpasu iwe. Chee echiche II ejiri m n'aka na enwere okwu teknụzụ ziri ezi maka ya na igwe mmega ole na ole m na-ahụ T-shirts ole na ole ebe a mgbọ ka anyị laghachi azụ ma ọ bụ ebe a bụ ebe mmiri na-ezo ebe ị ga-ama ụlọikwuu, yabụ ee N'ezie, nke a bụ ebe kachasị ọnụ ala na Chengdu ịzụrụ ị ga-enweta ebe ị ga-ama ụlọikwuu ị nwere ike ịnweta, dị ka akpa maka akpa gị, ngwugwu gị, oriọna, ị nwere ike ịnweta stovu can nwere ike ịmịnye gị. nwere ọtụtụ ihe ị na-enweghị ike ịzụta n'ụlọ ahịa ndị ọzọ na chengdu ma ọ bụrụ na ị ga-azụ ha n'ụlọ ahịa ndị ọzọ, ọ ga-adị oke ọnụ. Mgbe m lere ụlọikwuu ndị a anya, echere m na ọ nwere ike ịbụ 200 ma ọ bụ ihe yiri ya, ee, 300 qui maka ụlọ ntu a ma m hụrụ ya nke ukwuu - onye a na ụlọ ahịa na-esote ụlọ m na ọ bụ ihe dị ka 700 ka ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ ọnụahịa ya mere chee na ị maara nke ahụ bụ ihe nnukwu mba dị iche iche nwere ike iwetara gị nke a mana ee ọ bụ naanị ọnụ ala na ebe kachasị mma iji zụta uwe egwuregwu ebe a na China oh echefuru m na m hụrụ ngalaba a n'anya bụ ngalaba ịchụ nta ha nwere ihe kamel niile ha nwere ma ha nwekwara onyonyo nke ndi dinta yiri nke a dika ha nwere akụrụngwa niile maka ichu nta, ma e wezụga maka akụkụ ndị kacha mkpa dị ka ngwa ọgụ ma ọ bụ ụta na akụ ma ọ bụ ihe yiri ya, ha enweghị nke ọ bụla n'ime ha ebe a, mana ha nwere akụrụngwa ịchụ nta.
Ọ dị mma, nke a bụ ihe na-atọ ụtọ, ha nwekwara ihe ịkụ azụ. Ee, ọ bụ ihe a na-adịghị ahụkebe ịhụ ụlọ ahịa egwuregwu niile na China. Na China ihe ọ bụla na-ekewa n'ụzọ ụfọdụ na ụta na akụ, mana e nwere akụ mmịba ha ee ihe niile na-ekewa n'ụzọ ụfọdụ ị ga-agafe ụlọ ahịa igwu mmiri ị ga-aga ụlọ ahịa basketball ị ga-aga ụlọ ahịa a ọpụrụiche ebe a ọ dị mma, otu Inwe ohere na-eme ka ihe niile ị maara, ịzụ ahịa gị ga-akwụsị, enwere m mmasị na nke ahụ ya mere m nọ ebe a taa iji nweta akpụkpọ ụkwụ bọọlụ, ee, n'ihi na m na-agba bọọlụ n'abalị a, ee, na ya bụ ihe dị ka ule nke ahụ ike m n'ihi na m gbara maka otu n'ime otu egwuregwu bọọlụ mba ndị a nọ na Chengdu.
N̄kesibre mmọ nte mbre oro nsibrede. Nkeji 15 na-agwụ ike ma ụkwụ m gbuo m mgbe nke ahụ gasịrị, yabụ anọ m ebe a ka m ledo anya ezigbo akpụkpọ ụkwụ ndị ahụ m ga-egwu, yabụ enwere m ike iso ụfọdụ ndị mara mma anyị ga-ahụ, ee ee anyị ' Aga m eme ka ị mechara mara ka egwuregwu ahụ si aga mana ee ka m wee nweta nke a ma enwere m ike ịchọpụta onye n'ime unu maara ihe ọzọ m ga - achọ ka m wee zụta bọọlụ ebe a enwere m otu izu gara aga ma ọ bụ tupu Zụta bọọlụ ebe a ụbọchị ole na ole gara aga. Ha nwetara obere na iberibe maka mmega ahụ na ihe, ya mere, ee, a ga m ahapụ gị ka m nweta ụfọdụ ma m ga-eme onwe m ụfọdụ ogologo ọkpa oyi, ọ dị mma, ee, achọrọ m ụfọdụ ndị na-eche nche ka m wee nwee ike ịnweta akara mgbatị ahụ ma ọ bụ binye m ụfọdụ maka abali a, mana ee, ka anyị gaa ee, ee, kedu ihe dị mma maka ịkụ ala ka ị nwee ike ịhapụ cones maka olulu na ihe ndị ọzọ, ọ dị mma, nke ahụ dị mma, mana ka anyị nwaa akpụkpọ ụkwụ, chee, anyị ga-aga ndị a mgbe m gbalịchara di na nwunye nke 250 kwesịrị ịdị mma lelee nke a, atụghị m anya na ha ga-enweta bọọlụ rugby rugby na ha nwere bọọlụ american nke bụ ihe ịtụnanya mana ka akpụkpọ ụkwụ ahụ dị mma na enwetarala m bọọlụ m na m ga gaa obere oge tupu abalị a, jegharịa, hụ otu ọ na-adị, mgbe ahụ enwere m ike itinye ụfọdụ eserese nke egwuregwu ahụ, ma achọrọ m igwu egwu ma ọlị, yabụ ee, ọ dị jụụ, daalụ nke ukwuu maka inye gị ntakịrị ntakịrị anya n'ime decathlon na China oh ezigbo mma, anyị niile bụ ezigbo ụlọ ahịa egwuregwu II dị ka ịbịa ebe a, ọ bụ ebe m malitere n'izu na-abịanụ ruo n'oge na-adịbeghị anya, mana ọ bụ naanị na ọ na-atọ ụtọ mgbe niile, ọ na-atọ ụtọ mgbe niile, enwere ihe ọhụụ ọhụụ ịlele ee, ekele maka ikiri, lee gị niile oge ọzọ
Emere anyịnya igwe Cube na China?
Tụnyere ọtụtụ ndị ọzọigwe kwụ otu ebeụdị nwere haanyịnya igwegbakọtara na Taiwan ma ọ bụChina,Cubekpọkọta ọtụtụ n'ime haanyịnya igwena Germany. Na ụlọ ọrụ Waldershof,Cubena-enweta ihe niile achọrọ iji kpokọta ha-wuru anyịnya igwe.Ọgọst 30 2016
Eddie Merckx ọ doụrụ ọgwụ?
Merckx bụmmeri banyere agbụrụ 30 kwa afọ. Ọbụugbua 'na'Merckx.Ọgwụ-iwere bụkwuru banyere naanị n'okpuru. Ọbụọ bụghị ruo na 1962, mgbe mbụ18 ma agakwuruwo ndị agadi, na m weere ọgwụ m mbụ - amphetamines.
Gini mere decathlon ji di onu ala?
Otu n'ime ihe ndị kasị dị ịrịba ama ihe mereỌnụ ala Decathlon bụPọtụfoliyo ya dị iche iche. Ndị na-ere ahịa ahụ nwere onyinye pụrụ iche maka egwuregwu 86 na pọtụfoliyo mba ya, 70 na France (obodo ya), na 60 naSingapore.Febbọchị 6 2021
Eddy Merckx ọ bụ onye aghụghọ?
A na-echekarị ya dị ka onye kacha ukwuu na onye nwere ihe ịga nke ọma na akụkọ ihe mere eme nke ịgba ígwè. Otú ọ dị,Merckxjidere ya na ụdị doping atọ dị iche iche n'oge ọrụ ya. Ebe ọ bụ naMerckx siezumike nká site na egwuregwu na 18 May 1978, ọ nọgidere na-arụsi ọrụ ike na ụwa ịgba ígwè.
Kedu ihe Eddy Merckx bara?
Eddy Merckxnetkwesịrị:Eddy Merckxbụ a Belgium mbụ ọkachamara ụzọ na track agba ịnyịnya ígwè onye nwere a netkwesịrịnke $ 20.Eddy MerckxAmụrụ na Meensel-Kiezegem, Brabant, Belgium na June 1945.Eddyrụrụ ọtụtụ egwuregwu dị ka nwatakịrị mana ọ hụrụ mmasị ya n'ịgba ịnyịnya ígwè.
Decathlon ọ na-ere Nike?
Ya mere, anyi huru na odighi nke ato kacha elu nke egwuregwu, ya bu,Nike, Adidas, na Puma, so na akara iri kacha elu nọchitere anya nadecathlon. Ọzọkwa, otu n'imedecathlonIhe e ji mara ya bụ inye otu ụdị egwuregwu ọ bụla.12.11.2020
Kalenji bu ezigbo akara?
Ma, eeKalenjiakpụkpọ ụkwụ dị ukwuummakarịa ụlọ ọrụ ndị ọzọ.Kalenjirịọukwuakpụkpọ ụkwụ dị mma na ọnụahịa dị oke ọnụ ala ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ. Ha na-enye afọ 2 akwụkwọ ikike na naanị. Ọdịdị ha na akwa ha dị mma ya.
Kedu nke kacha mma igwe Ridley iji zụta?
NT--NT ORR Disco Ego na ndenye ọpụpụ! Ridley RIDELY NAH FAST Disc. DuraAce Di2. ZIPP 303s. Supacaz. Grey Metallic-Black-Red Metallic (Matte) 2020 PRE-ORDER Ego na ndenye ọpụpụ! Ridley RIDELY NAH FAST Disc. Ultegra Di2. ZIPP 303s. Supacaz. Grey Metallic-Black-Red Metallic (Matte) 2020 PRE-ORDER Ego na ndenye ọpụpụ! Ridley RIDELY NAH FAST Disc.
Kedu ụdị igwe kwụ otu ebe bụ Ridley Noah?
Ridley Noah agbụrụ ụzọ igwe kwụ otu ebe, Campagnolo Record, Dị ka nke ọhụrụ. OHU ỌH !R!! Ridley X-Night 54cm Carbon Sram Red W / Mavic Carbon Wheels CX Road
Ebee ka ụlọ ọrụ Ridley igwe kwụ otu ebe dị na Belgium?
Ridley dabeere na Flanders, Belgium - obodo a na-agba ịnyịnya ígwè. Home ka ụfọdụ n'ime ndị kasị akpali akpali pro ịgba ígwè agbụrụ si n'ebe, dị ka ndị njem nke Flanders na Gent-Wevelgem, a mpaghara ebe ndị na-agba ịnyịnya na-eme nke ọma n'okporo ụzọ siri ike ma na-agba agba.